Guggulsterone पाउडर (95975-55-6) hplc≥98% | AASraw आर एन्ड डी अभिकर्ताहरू
/ उत्पादन / आर एन्ड डी अभिकर्ताहरू / Guggulsterone पाउडर
SKU: 95975-55-6. श्रेणी: आर एन्ड डी अभिकर्ताहरू
AASraw Guggulsterone पाउडर (95975-55-6) को ठूलो क्रममा ग्राम देखि संश्लेषण र उत्पादन क्षमता, CGMP विनियमन र trackable गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत छ।
Guggulsterone पाउडर भिडियो
कच्चा गगनचुस्टरोन पाउडर आधारभूत क्यारेक्टरहरू
नाम: Guggulsterone पाउडर
पिघल प्वाइन्ट: 170-171.5 ° C
रंग: हल्का पहेंलो पाउडर
उपयोगमा कच्चा गगनचुस्टरोन पाउडर
Devadhupa, Balsamodendrum wightii, Balsamodendrum मुकुल, Commiphora मुकुल, Commiphora wightii, Gomme Guggul, Gomme-Résine de Guggul, Guggal, Guggul Gum रिन, Guggulip Lipids, Guggulipid, Guggulipide, Guggulu, Guggulu Suddha, Guggulsterone पाउडर, आदि
Guggulsterone पाउडर प्रयोग
Guggulsterone पाउडर गुगुल संयंत्र, Commiphora मुकुल को राल मा पाइएको फाइटोस्टोइड छ। Guggulsterone पाउडर दुई स्टेरियोइओइमरहरू, ई-गिगुलस्टरोन पाउडर र Z-Guggulsterone पाउडरको रूपमा अवस्थित हुन सक्छ। मानिसहरूमा, यो फर्नसेइड एक्स रिसेप्टरको एक विरोधीको रूपमा कार्य गर्दछ, जुन एक पटक विश्वास भएको थियो कि लिभरमा कोलेस्ट्रल संश्लेषण कम भयो। धेरै अध्ययनहरु प्रकाशित गरिएको छ कि कुनै पनि कुल कोलेस्ट्रोल मा कुल कमी गग्लुस्टरोन पाउडर को खुराक को प्रयोग गरेर नहीं गर्छन, र कम घनत्व लिपोपोटिन को स्तर ("बुरी कोलेस्ट्रॉल") को धेरै मान्छे मा वृद्धि भएको छ। यद्यपि, Guggulsterone पाउडर धेरै पोषक तत्व पूरक मा एक संघटक हो।
गुलगुलको रूखबाट ओलोगम राल (गिगलको रूपमा चिनिन्छ), भारत, बांग्लादेश र पाकिस्तानमा पाइने कमफाडा मुकुल, धेरै हजारौं वर्षहरुमा हाइपर कोलेस्ट्रियोलिया, एथेरोस्क्लोरोसिस, रथुमेटिज्म र मोटाइ सहित विभिन्न रोगहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिएको छ। गिगुलबाट पृथ्वीनगरिएको गिगुलस्टरन पाउडर गुगुलको चिकित्सकीय प्रभावहरूको लागि उत्तरदायी जैविक सक्रिय घटकको रुपमा पहिचान गरिएको छ। पहिलो अध्ययनले 1966 मा एक जनावर मोडेल मा गागल को चिकित्सीय प्रभाव को प्रदर्शन को रूप मा, धेरै preclinical र नैदानिक ​​ट्रेल्स लिया गएको छ। यद्यपि अध्ययन डिजाइन, विधवात्मक गुणस्तर, सांख्यिकीय विश्लेषण, नमूना आकार, र विषय आबादीमा मतभेदहरू थेरेपीको प्रतिक्रियामा केही विसंगतिहरुमा परिणाम, विट्रो, पूर्व-क्लिनिक र क्लिनिकल अध्ययनका संकलन डेटा ठूलो मात्रामा गगुलको वर्णनमा चिकित्सक दावीहरुको समर्थन गर्दछ। प्राचीन आयुर्वेदिक पाठ। तथापि, भविष्यका क्लिनिकल अध्ययनहरू धेरै ठूलो साइज र लामो समयसम्म यी दावीहरू पुष्टि गर्न आवश्यक छन्। उपचारको हृदयगत लाभ गुगुल वा गिगुलस्टरोन पाउडरसँग सम्बन्धित औषधीय गतिविधिहरूबाट उत्पन्न हुन्छ, विशेष गरी यसको hypolipidemic, एंटीओक्सिडेंट, र antiinflammatory गतिविधिहरु। यो स्थापित भएको छ कि गिगुलस्टरन पाउडर farnesoid एक्स रिसेप्टर (FXR) मा एक विरोधी हो, कोलेस्ट्रॉल र पित्त एसिड होमोस्टासिस को रखरखाव को लागि एक महत्वपूर्ण ट्रांसक्रिप्लिकल नियामक। Guggulsterone पाउडर द्वारा FXR विरोधाभास यसको hypolipidemic प्रभाव को लागि एक तंत्र को रूप मा प्रस्तावित गरिएको छ। हालैको अध्ययनले देखाएको छ कि गिगुलस्टरोन पाउडरले पनीर नमक निर्यात पम्प (बीएसईपी) लाई असर गर्दछ, एक प्रभावकारी ट्रान्सपोर्टरले कोलेस्ट्रल चयापचय हटाउन जिम्मेवार, जिगरबाट पित्री एसिड। Guggulsterone पाउडर द्वारा बीएसईपी अभिव्यक्ति को यस्तो अपर्याप्तता कोलेस्ट्रल चयापचय को रूप मा पतली एसिड मा एहसास गर्दछ, र यसैले यसको सम्मोहन गतिविधि को लागी एक अन्य संभावित तंत्र को प्रतिनिधित्व गर्दछ। Guggulsterone पाउडर को परमाणु कारक को सक्रियता लाई रोकन को लागी पाया गएको छ - कापा बी (एनएफ-कप्पा बी), भ्रामक प्रतिक्रियाहरु को एक महत्वपूर्ण नियामक। Guggulsterone पाउडर द्वारा NF-kappa बी सक्रियता को यस्तो दमन Guggulsterone पाउडर को antiinflammatory प्रभाव को एक तंत्र को रूप मा प्रस्तावित गरिएको छ।
र कमजोरीको केही लक्षणहरू के हुन्?
यो मेरो लागि अर्थ बनायो कि यदि एक थाइरोइड हार्मोन को मोटोइडिक हार्मोन (जस्तै एडेन्रेनाइन) संग वोसोइड हार्मोन को मोटो जलने वाला प्रभाव को संयोजन गर्न सक्छ केहि धेरै नै नाटकीय परिणाम हुनेछ। साथै, रोचक तथ्य यो तथ्य हो कि ईसीए प्रकार स्ट्याक थाइरोइड हार्मोन को मात्रा को समयमा रक्त मा घर्षण को मात्रा कम गर्छन। Guggulsterone पाउडरहरूले यो कमीलाई रोक्न महान काम गर्छ, यसैले अधिकतम शारीरिक स्तरमा काम गर्ने सबै शारीरिक वसा जलस्रोत प्रणाली राख्दछन्।
अन्तिम तरिका हो कि Guggulsterone पाउडर को बोसो जलाउन को लागी लाभ मा लाभ उठाउन कोनेजनेन आहार र विकास हार्मोन को प्रयोग मा छ। समयको समयमा, केनेजनेन डेटहरूले T4 को अधिक शक्तिशाली T3 को रूपान्तरणलाई कम गरेर थाइरोइडको प्रभावशीलतालाई कम गर्छ। साथै,3महिनाको लागि Guggulsterone पाउडरहरू दैनिक लिएका थिए, उनीहरूले प्रायः रोगीहरूमा घाँटीमा प्रगतिशील कमी उत्पन्न गरे। Tetracycline संग, भ्रामक घावों मा प्रतिशत कमी 65.2% के रूप में GGGuloneone पाउडर के साथ 68% की तुलना में था। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो मित्र Guggul मुँहासे लड्न अत्यन्त शक्तिशाली छ।
यसबाट कसले लाभ उठाउन सक्छ? हम्मम !!! खैर, जहाँसम्म म भन्न सक्छु, लगभग सबैजना। त्यहाँ एक व्यक्ति हो जुन मलाई थाहा छ कि एक राम्रो रंग मनपर्दैन। यो विशेष गरी एनालिलिक / एन्ड्रोजेनिक स्टेरियोड्सका लागि सही छ किनकी यसले छालाको तेल बढाउने र मुँहासेको लागि सम्भावना बढाउँछ। मलाई अनुमान लगाउनुहोस् - कसैलाई श्री हगुले गिगुले मा हँसिन्छ! निस्सन्देह, उहाँ एक अजीब नाम हुन सक्छ तर मेरो पुस्तकमा उहाँ नायक हुनुहुन्छ। तपाईं कहाँ एक कम्पाउन्ड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईंको मोटो गुमाउन मद्दत गर्नेछ, तपाईंको कोलेस्ट्रोल प्रोफाइल सुधार गर्न र एकै समयमा आफ्नो रंग सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ? मैले लामो र मेहनत देखेको छु र अझै पनि एक प्रतियोगी भेट्न आएको छु।
कति टाढा लिनु पर्छ?
र त्यहाँ कुनै साइड इफेक्ट छन्?
ओह हाँ! मैले बिर्सनुअघि खुसीले लिनु पर्छ 30-60m खानाको साथ तीन चोटि।
एक उत्पादन फेला पार्न सँधै सम्झनुहोस् जसमा उच्च शक्ति प्राकृतिक रूपमा निकाले गगुल! मेरो अन्तिम सल्लाह त्यसपछि बाहिर जान्छ र यो मान्छेलाई भेट्टाउन, आफ्नो हात हिलाउनुहोस्, र त्यसपछि उसले ल्याउने फाइदाहरूको होस्ट गर्नुहोस्।
Guggulsterone पाउडर मा चेतावनी
गुगुल प्लाटबाट निकालेएको एक पहेंलो राल समावेश गर्दछ गगुलस्स्ट्रोन पाउडरहरू र सम्भवतः अरू भनिन्छ। प्रयोगशाला अध्ययनहरूले पत्ता लगाएको छ कि गिगुलस्टरन पाउडरले कोलेस्ट्रॉलको चयापचयलाई जिगरले परिवर्तन गर्न सक्छ। Guggulsterone पाउडरहरूले पनि थाइरोइड हार्मोन उत्पादन गर्न सक्छ र सामान्यतया उद्देश्यको लागि वजन घटाने पूरक समावेश गर्दछ। साइड इफेक्टको खतराको कारण गुगुल निकाटहरू मा सावधानीपूर्वक लिन सकिन्छ।
हजारौं वर्षको लागि, गगुल राल पारंपरिक औषधिमा प्रयोग गरिएको छ जो गठिया, गठिया, न्यूरोलोजी रोग, बवासीर, मूत्र विकार र छाला रोगहरूको उपचार गर्न। आधुनिक औषधिले पत्ता लगाएको छ कि गिगुलस्टरन पाउडरहरूले लिगरमा कार्य गर्न सक्छन्, लिपिड चयापचय को विकारहरु जस्तै उच्च कोलेस्ट्रॉल जस्तै। एक अज्ञात तंत्रमार्फत गुगुलस्टरन पाउडरले थाइरोइड ग्राउण्डको हार्मोनको उत्पादन बढाउँछ, शरीरमा ऊर्जाको उपयोग बढाउँछ।
Gogul निकाट warfarin, एस्पिरिन, nonsteroidal विरोधी भ्रामक ड्रग्स वा कुनै पनि अन्य ड्रग्स कि रक्त खट्टा रोक्न रोक्ने छैन। यी ड्रगहरू लिँदा गगुल निकाटले गम्भीर वा अनियन्त्रित ब्लीडिंगको जोखिम बढाउन सक्छ। Guggul निकाले थाइरोइड विकारहरूको उपचार गर्न प्रयोग सिंथेटिक थाइरोइड हार्मोन वा अन्य दबाइहरूको साथ अन्तरक्रिया गर्न सक्छ। एक साथ लिइयो, guggul र थाइरोइड दबाइहरु थाइरोइड तूफान को जोखिम बढ्न सक्छ, एक संभावित जीवन-धमकी वाला स्थिति जसमा थाइरोइड हार्मोन को धेरै मात्रा मा उत्पादन गरिन्छ। Guggul निकाट गर्न सक्छन् प्रोप्रानोलोल वा diltiazem ड्रग्स को प्रभाव को कम गर्न सक्छ।
उनीहरूले हाइइओ-हाइपर थाइरोइडाइम सहित समेत थाइरोइड विकारका लागि उपचार गरेका छन्, guggul निकाल्न अघि आफ्नो चिकित्सकलाई परामर्श गर्नु पर्छ। जिगर वा गुर्देको रोगले मानिसलाई सामान्य रूपमा निकाल्दछ र यसलाई लिनु हुँदैन metabolize हुन सक्छ। सामान्यमा, आफ्नो चिकित्सकलाई सल्लाह दिनुहोस् कि तपाइँ गगुल एक्टर तपाईंको लागि सुरक्षित छ कि छैन।
अन्य सम्भावित पक्ष प्रभावहरू
गुगुल निकाटको सम्भावना विषाक्ततामा सानो वैज्ञानिक जानकारी अवस्थित छ। यो अज्ञात हो कि गगुल गर्भावस्था को समयमा सुरक्षित छ कि, तर थाइरोइड हार्मोन र लिपिड चयापचय मा प्रभाव को कारण यो शायद बचना चाहिए। Guggul निकाटले सिरदर्द, चाउचाउ, ग्यास्ट्रोइस्टिनल असुविधा र खराबीको कारण हुनसक्छ। गुगुल निकाटमा एलर्जी प्रतिक्रियाहरू रिपोर्ट गरिएको छ।
Guggulsterone पाउडर एक व्यापक स्पेक्ट्रम ligand को स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर हो, र निम्न गतिविधिहरु लाई जानिन्छ:
खनिज्रोकोर्टिकोइड रिसेप्टर प्रतिवादी (Ki = 39 एनएम)
प्रोजेस्टरोन रिसेप्टर आंशिक एलोनीस्ट (Ki = 201 एनएम)
ग्लुकोकोर्कोइड रिसेप्टर एन्टिनानेस्ट (केडीई = 224 एनएम)
एण्ड्रोजन रिसेप्टर विरोधी (केन = 240 एनएम)
एस्ट्रोजन रिसेप्टर एग्रोनिस्ट (Ki>5μM; एक्सक्समिक्स> 50 μM)
Farnesoid X रिसेप्टर विरोधी (IC50 = 5-50 μM)
गर्भवती X रिसेप्टर एग्रोनिस्ट (EC50 = 2.4 μM ((Z) -इमर))
गुगुलस्टरोन पाउडर जनावर अनुसन्धानमा फेला पर्यो मौखिक सक्रिय हुन; यो 42.9% को पूर्ण चयापचय हुन्छ चूहों मा मौखिक प्रशासन पछि, यस प्रजातिहरु को आसपास 10 घंटों को आधे जीवन संग, एक राम्रो फार्माकोकोनिनेट प्रोफाईल को संकेत।
Guggulsterone कच्चे पाउडर
कच्चा गगुलस्टरोन पाउडर मार्केटिंग
AASraw बाट Guggulsterone पाउडर कसरी खरीद
Guggulsterone कच्चे पाउडर व्यंजनों:
वजन घटाने र शरीर निर्माणको लागि गगुलस्टरोन (गिगल)